Munamato Yekubatsirwa Kwazvino Kubva Kuna Mwari | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Munamato Yekubatsirwa Kwazvino Kunobva Kuna Mwari
Nhasi tichave tichiita munamato wekukumbira rubatsiro kubva kuna Mwari nekukurumidza. Kana iwe wanga uchienderana nemabhuku edu, unogona kunge wakaverenga nyaya yedu pa munamato mupfupi wekubatsira. Kana iwe wakarava izvo, iwe unogona kunge uchishamisika kuti chii ikozvino chiri musimboti wemunamato wekukurumidza rubatsiro kubva kuna Mwari isu tatova nemunyengetero mupfupi wekubatsirwa. Iwe unofanirwa kuziva kuti rubatsiro rwacho pacharwo runotora muitiro wakareba apo Mwari vaizonunura vana veIsreal kubva muhusungwa hwaFarao, kununurwa kwavo hakuna kuuya nehusiku, zvakatora zvishoma nezvishoma maitiro. Mwari vaiziva kuti vana veIsreal vaifanira kupfuura nemamwe maitiro; ndosaka Akatendera kununurwa kwavo kuti kuuye zvishoma nezvishoma.
Pane imwe, apo iyo yakasvika kune gungwa dzvuku uye pakanga pasina nzira yekuenda kumberi uye, zvakadaro, Farao nengoro dzake vaimhanyisa kumashure kwavo kuti vatore ivo uye vadzose vana veIsreal kuhuranda muIjipita. Kubatsira kunodiwa nevana Isreal panguva iyoyo kwaisave kuri kunouya zvishoma nezvishoma. Vaida kubatsirwa nekukasira, pakarepo, icho chichaitika nekukasira. Zvakare, muhupenyu hwedu, rumwe rubatsiro runouya zvishoma nezvishoma, uye pane zvimwe zvinofanirwa kuitika iyo miniti chaiyo, kana zvimwe, chiitiko chisina kunaka chingaitika. Semuenzaniso, mumwe munhu ari kuenda kuimba yemitambo kuti avhiyiwe uye mikana yekupona ndeye 50/50. Munhu akadaro anoda kubatsirwa nekukurumidza.
Mumwe muenzaniso wakakwana wekubatsira nekukurumidza unogona kuwanikwa mubhuku raJoshua apo Joshua airwa nevaAmori, Joshua aiziva kuti husiku hwaive hwauya, uye vavengi vachatiza kana pasi rakafukidzwa nerima. Naizvozvo, ivo vaida kubatsirwa, Joshua akaraira zuva kuti rimire pamusoro paGidheoni, uye mwedzi unofanirwa kumira pamusoro peAjaroni. Rugwaro rwakazvinyora kuti Mwari haana kutongoteerera kumunamato wemurume sezvaakaita kuna Joshua. Isu tinodawo rumwe rubatsiro rwepamberi muhupenyu hwedu, pamusoro pemabhizinesi edu, pamusoro pezvidzidzo zvedu, basa, uye nezvese zvinoenderana nehupenyu hwedu.
Ishe Mwari, ndinonamata nerubatsiro rwenyu sezvo ndichange ndichienda kuimba yemitambo mangwana, ndinonamata kuti maoko enyu aende neni muzita raJesu. Rugwaro rwunoti maziso aIshe anogara aripo pane vakarurama, uye nzeve dzake dzinogara dzakatarisana neminamato yavo. Baba Tenzi, ndinonamata kuti maoko enyu ave pahupenyu hwangu, ndinonamata kuti kuchengetedzwa kwenyu kuve pamusoro pangu. Ishe ndinonamata kuti nengoni dzenyu, mushandire pamwe nemachiremba nevanamukoti, uye muchavapa kukunda muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamatira rubatsiro rwenyu mumutongo wemangwana. Kana zvimwe zvikasaitika, vanhu vachaseka zita renyu dzvene kuburikidza neni. Vanoziva kuti ndiwe wega wandinoshumira, uye ndakazvipira kubasa rangu kwauri. Baba Tenzi, pachinyorwa chino, ndinotsvaga rubatsiro. Rugwaro rwakaita kuti ndizive kuti iwe une moyo wemunhu nemadzimambo, uye unovatungamira sekuyerera kwemvura. Ndinonamata kuti iwe ubate moyo wemutongi, uye iye / iye achapa mutongo wandinotsigira. Izvo zvakanyorwa kuti kana nzira yemunhu ichifadza Mwari, Iye achamuita kuti awane nyasha pamberi pevanhu. Ishe Jesu, regai ndiwane nyasha pamberi pemutongi mangwana nezita renyu rinokosha.
Ishe Mwari, vadzivisi vangu, vakawandisa, uye vakapika kuti havazorori kusvikira vandiisa pasi. Nekudaro, ini ndinonyaradza mushoko rako rinoti zita raIshe inhare yakasimba, vakarurama vanomhanyira mariri vakaponeswa. Baba ishe, ndinonamata kuti musimuke mundipe kukunda kwavo muzita raJesu. Simuka, Ishe, vavengi vako ngavaparadzirwe, Ivo vanovenga uye vanotsvaga kukundwa kwangu vanyadziswe.
Ishe Jesu, ndimi mubatsiri wangu chaiye panguva yekushaiwa. Ndave kupomerwa zvisiri izvo; nyika yese yava kundiona semunhu ane mhosva nekuda kwemazwi avakanzwa nezvangu. Imi moga ndimi munoziva kuti ini handina mhosva, uye ini hapana chandinoziva nezve mhosva. Ishe Jesu, ndinonamata kuti mundireverere. Ndinonamata kuti iwe uchaita kuti kurwa kuitike mumusasa wevavengi vangu, uye iwe ugadzire mutsauko pakati pavo. Rega avo vakataura zvakaipa nezvangu vasambowana rugare, kunyangwe vakaedza zvakadii, ngavanyadziswe nguva dzose. Mukurara kwavo manheru ano vanoonekwa kwavari seShumba murudzi rwaJuda, regai vaone pakurota kwavo vakuitise kuti vasambove nerunyararo kusvikira vataura chokwadi.
Baba Tenzi, kumirira kwenguva refu kunogaro ita kuti tariro uye kutenda kwemurume kuzununguke. Ishe, ndakamirira kwenguva refu kuti mundiropafadze, asi ikozvino, zvinoita sekunge ndapererwa nemoyo murefu, mazwi evakaipa anouya achinditsamwira zuva nezuva. Ndakaitwa chinhu chinosekwa nekuda kwehunhu hwangu. Asi ndinoziva kuti ndimi Mwari anokomborera vanhu. Rugwaro runoti Mwari wangu achazadzisa zvese zvandinoda maererano nehupfumi hwake mukubwinya kuburikidza naKristu Jesu. Ini ndinokoshesa mushoko raMwari iri, uye ndinonamatira kupihwa zvese zvandinoda muzita raJesu. Ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, mugozondipa zvese zvandinoda, muchandiropafadza zvakanyanya, maropafadzo anoita kuti muromo uvhure ajar, maropafadzo anokurudzira vamwe vanhu, ndinonamata kuti mundibatsire muzita raJesu .
Baba Ishe, ndinonamatira murume nemukadzi wese kunze uko uko kwaitwa rubatsiro. Ndimi rubatsiro rwevasina rubatsiro, baba venherera, uye ndinonamata kuti muvabatsire muzita raJesu. Sanganai nemunhu wese padanho rezvavanoda uye muite kuti vaimbe Hareruya kuzita renyu dzvene. Ameni.
Previous nyayaKunamatira Rubatsiro NeNdima dzeBhaibheri
inoteveraKunamatira Kubatsira Uye Kutungamira
Jacquelyn Jones Nyamavhuvhu 23, 2020 At 5:39 am
Verenga munamato wako uye uine rugare rwakanyanya kubva kwavari. Ndokumbira uenderere mberi nekuprinda mweya yekutsvaga minamato munguva dzakadai. Mwari Komborera!
Oluwaseun Phillip Gunyana 30, 2020 At 2:33 am
Kenneth Grey Chikumi 18, 2021 Panguva ya6: 17 pm
Ingoramba uchinamata? Kana Mwari vari kunyarara, uye vasina kupindura chero chinhu, nei uchifanira kuramba uchinamata? Haapinduri. Iye anovimbisa kuti ave pano kwatiri. Ipapo Iye (Mwari) haatombo kuratidza. Kunyarara kwaMwari kwakanyanya kudarika chero chinhu. Kunyarara hakusi pano kwatiri. Kuve pano kwatiri zvinoreva kuve nekudyidzana muhupenyu hwedu. Kunyarara uye kusavapo hakusi kuwirirana.
Ndatenda, uye Mwari vakuropafadze, muzita raJesu dzvene, Ameni.
Kudhiraina Nzvimbo Yakasimba Minyengetero minamato
30 minamato Yekunamata Mirawu Yekuporesa